Liquid Kuzadza Uye Kuisa Muchina Machine Fekitori - China Liquid Kuzadza Uye Kuisa chisimbiso Machine Vagadziri, Vatengesi
Liquid Kuzadza Uye Kuisa Muchina HGS-240 (P15)
Performance uye inoratidzira Yakakwira kugona, kumhanya kwazvo, kunyatsoita, uye yekumberi inofamba inodzora. Pasina nhanho frequency kutendeuka kumhanya kudzora kutonga. Servo mota kudzora. Yevanhu-muchina interface. Servo firimu traction. Iko kutsiviwa kweforoma uye kureba kwayo kugadzirisa kuri nyore uye nyore kushandisa. Otomatiki kusunungura, kupeta firimu kucheka uye kupeta. Iyo ine yakanaka uye yakashata pateni yekumisidzana basa neiyo Photoelectric chishandiso. Sezvo pasi pehombodo iri yakati sandara, inogona kumira ...
Liquid Kuzadza Uye Kuisa Muchina HYLGX-2
E-mvura kurongedza mutsetse Uyu wekutakura mutsara une bhodhoro yekudyira tafura, yekuzadza muchina, capping muchina, wekunyora muchina. Zviri zvikuru kuti e-mvura chiputiriso. Mutsara wese wakagadzirwa zvinoenderana neGMP standard, zvese zvikamu zvinosangana nezvinhu zvakagadzirwa nemhando yepamusoro simbi isina simbi. Uye inoshanda kune akasiyana mabhodhoro. Iyo yakanaka michina uko chikafu chemakemikari mishonga yekuzora maindasitiri. 1.Linear mhando, wega muchina unogona kumhanya wakazvimirira, unogona kugadziridzwa kuitira vario ...
Performance uye chimiro Iyo inotora PLC kutonga uye isina nhanho frequency kutendeuka kumhanya mirau. Iwo mashandiro ekushanda senge kusunungura, plastiki kuumba, kuzadza, batch nhamba kudhinda, induction, kubaya uye kucheka zvinopedzwa otomatiki nechirongwa. Inotora chigadzirwa chemunhu-chemuchina, icho chine mashandiro mashoma Kuzadza hakuna kudonha, kufefetera, uye kufashukira. Izvo zvikamu zvinosangana nemushonga zvese zvinotora zvemhando yepamusoro simbi isina chinhu, iyo inosangana neGMP ...